သူ့ရဲ့ရတနာသည်ဘုရားသခရှိထားသူကားအဘယ်သူအဆိုပါလူသား — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
မိမိဘဏ်ဍာအဘို့ဘုရားသခင့ရှိပါတယ်သောသူတစ်ခုမှာခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်. အများစုကသာမန်ဘဏ္ဍာကိုသူ့ကိုငွငျးစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သူကသူတို့ကိုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုလျှင်, သူတို့အခံစားဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ပျော်ရွှင်မှုလိုအပ်သောဖြစ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုစနစ်ဖြစ်ပြီးလိမ့်မည်. သို့မဟုတ်သူကသူတို့ကိုသွားတွေ့မြင်ရပါလျှင်, တဦးတည်းအပြီးတယောက်, သူခဲဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုသဘောခံစားရပါလိမ့်မယ်, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို၏ရငျးမွစျရှိခြင်းများအတွက်သူတစ်ဦးအတွက်အားလုံးစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်, အားလုံးပျော်မွေ့, အားလုံးပျော်မွေ့. သူကတကယ်တော့ဘာမှမဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါဘာပဲ, အခုသူတစ်ဦးအတွက်ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်များအတွက်, သူကသက်သက်သာကရှိပါတယ်, တရားဝင်နှင့်အစဉ်အမြဲ.
A.W. Tozer, ဘုရားသခင်၏ကြိုးပမ်း
kelleyR • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်